Wararka - Safar cusub oo isdhexgalka warshadaha, is gacan qaad iyo curinta cutub cusub
Qalabka ilkaha ee Shenzhen Yurucheng Co., Ltd., oo aasaasay meela dhaadheer oo cusub mar kasta, wuxuu keenay daqiiqad taariikhi ah oo muhiim ah. Bishii Abriil 12, 2021, Shenzhen Yurucheng Qalabka Ilkaha Co., Ltd. iyo Shenzhen Dental Craftsman's Home Technology Co., Ltd. ayaa si rasmi ah u saxiixay heshiis iskaashi istiraatiiji ah. Waxaa lagu soo warramayaa in labada dhinac ay gaareen is -afgarad ku saabsan iskaashi ku aaddan is -dhexgalka tooska ah ee warshadaha, tababarka xirfadaha iyo kor u qaadista farsamayaqaannada ilkaha, is -weydaarsiga farsamada, iyo horumarinta warshadaha.
Iskaashigan istiraatiijiga ah, wadahadalo qoto dheer iyo faahfaahinta hirgalinta ayaa lagu fuliyay soo saarista baloogyada zirconium-ka dhoobada ah oo dhan, warshadaynta ilkaha ilkaha, tababarka farsamada iyo barashada, iyo alaabada ilkaha ee la habeeyay iyadoo loo eegayo baahida macmiilka. Dhex-dhexaadintu waxay sidoo kale kor u qaadday isgaarsiinta qoto-dheer ee dhammaan xiriiriyeyaasha, waxay dardargelisay waqtiga helitaanka macluumaadka warshadaha iyo baahiyaha macmiilka, waxayna ka dhigtay badeecado la jaanqaada baahiyaha isticmaalaha.
Bi Wenjuan, ku -xigeenka maareeyaha guud ee Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. ayaa soo bandhigay: Is -dhexgalka tooska ah ee warshadaha ee Yurucheng iyo Guriga Ilkaha, is -waafajinta qalabka ilkaha, qoondaynta macquulka ah ee ilaha, qoto dheer ee warshadaha, iyo kor u qaadista tartanka warshadaha Dhammaan ciidamadu waxay leeyihiin saamayn togan. Waa muhiimad aan caadi ahayn ee is -dhexgalka iyo dhex -gelinta warshadaha sare iyo hoose ee godka afka sida soosaarka alaabta ilkaha, warshadaynta ilkaha, rugaha ilkaha, iwm. baahida macaamiisha dhamaadka ah, jebiso caqabadaha warshadaha, iyo isweydaarsiga warshadaha. Ma jiro, si aad si fiican ugu adeegto isticmaaleyaasha ugu dambeeya.
Liu Jianjun, Madaxweynaha Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. ayaa yiri: Iyadoo la wanaajiyay wacyigelinta afka ee dadweynaha iyo u janjeeridda siyaasadaha qaranka ee dhakhaatiirta sida gaarka ah loo maamulo, warshadaha ilkaha waxay keeneen fursad weyn oo horumarineed. Xaaladda hadda jirta ee cudurka faafa, “halista” iyo “fursad” ayaa wada nool. Iyadoo aan aragno saameynta cudurrada faafa ku leeyihiin warshadaha afka, waxaan u baahannahay inaan si qoto dheer uga fikirno isbeddellada horumarineed ee mustaqbalka ee warshadaha afka, annagoo xoogga saareyna kan hadda jira iyo inaan mustaqbalka dhigno. “Waqtigan xaadirka ah, warshadaha ilkaha ayaa sameeyay silsilad warshadeed oo dhammaystiran, taas oo nooga baahan inaan galno marxalad tartan caafimaad leh iyo is -dhexgal inta aan ku horumarinayno xawaare sare. Keliya maareynta caadiga ah ayaa lagu xaqiijin karaa horumarka fog iyo kan wanaagsan ee warshadaha.
Waqtiga dhejinta: Jul-30-2021